ओलीको १५३ भर्सेस देउवाको १४९, कस्ले मार्ला बाजी ? – News543Online
NO 1 NEWSPORTAL IN TOWN
ओलीको १५३ भर्सेस देउवाको १४९, कस्ले मार्ला बाजी ?
May 21, 2021 adminLeaveaComment on ओलीको १५३ भर्सेस देउवाको १४९, कस्ले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं, ७ जेठ । नेपालको संसदीय इतिहासमा रोचक घटनाका रुपमा आजको दिन सदास्मरणीय हुनेछ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार आव्हान गर्दा दुईजना प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहुमतको दाबी प्रस्तुत गरे । त्यो पनि हस्ताक्षरसहित ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी प्रस्तुत गर्दा पार्टीका तर्फबाट हस्ताक्षर गरे । जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले संयुक्त हस्ताक्षर गरेको प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जनाएका छन् । रिमालले एमालेका १२१ र जसपाको ३२ गरी १५३ सांसदको समर्थन ओलीलाई रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
रोचक पक्ष यो छ कि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले र जसपाको सांसदहरुको हस्ताक्षर पुगेर बहुमत सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको दाबी पत्र बुझाउन राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुगेका छन् । उनले १४९ प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित पत्र बुझाएका हुन् । हस्ताक्षरमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि सभा सदस्यबारे कुनै विवाद छैन । तर, ओलीको दाबीले एमाले र जसपाको सांसदहरुको हस्ताक्षरलाई विवादमा पारिदिएको छ
देउवालाई नदिए प्र’तिवाद गर्नुपर्छ :नेता भट्टराई
यि श्रीमान जसले ८ घण्टा पिठ्यूँमा बोकेर को’रोना संक्रमित श्रीमतिलाई अस्पताल पुर्याए
रूकुम पुगेर प्रचण्डले भने- मलाई बम हान्नेलाई गृहमन्त्री बनाएर गल्ती गरें, अब त्यस्तो गर्दिनँ
धनुषामा पाेखरीमा डुबेर एकैपटक पाँच बालिकाकाे मृत्यु rip लेखेर 1 share आत्मा ले सान्ती पाउला
आमाको मृत्यु र बुवाले अर्को बिहे गरेपछि बिच्चली
गाउँ नै सोकाकुल बनायो rip लेखेर 1 share गर्नुहोस आत्माले सान्ती पाउछ😭
एमसिसि बि’रुद्ध ज्ञानेन्द्र शाही उत्रिए सडकमा,सभामुखलाई बुझाए ज्ञापन पत्र । (भिडियो सहित )
संगै बाच्ने संगै धर्ति छो’ड्ने भन्दै टिकटक बनाएका दाम्पत्यको एकै साथ मृत्यु दया भए Rip लेख्नुहोस्
हजुर लाई यी दुईमा कुन नेता मन पर्छ Kp. or माकुने आफ्नो बिचार कमेन्ट गर्नुहोस ।
तपाईं कमेन्ट गर्नुहोस मेरो बहुमत आउँछ कि नाई ।के.पि शर्मा ओलि